Featured Posts | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Read More ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအကယ်ဒမီမှ ဥပဒေအလုပ်သင်များ ခေါ်ယူခြင်း June 12, 2016 Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင်ဂျာယန်မြို့ တွင် တည်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီတွင် ဥပဒေ အလုပ်သင် (Law Internship) အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပို့ ချရသည့် ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (၁) ဖက်ဒရယ်ရေးရာ လှုပ်ရှားမှုအား ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးလျှက် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်နယ် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးတို့အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန်။ . (၂) “ဗဟိုပြည်ထောင်စုသို့ လွှဲအပ်သော အာဏာများမှလွဲ၍ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ စည်းရာတွင် ပါဝင်သည့် ပြည်နယ်များသည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်သည်။” (Member states of the
Read More Myanmar shelves investigation into killing of journalist Ko Par Gyi April 5, 2016 ENGLISH, Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း International Press Institute Ko Par Gyi shot in 2014 while in military custody Myanmar must not allow the case ofajournalist killed in 2014 while in military custody to sink into impunity, the International Press Institute (IPI) said today after police dropped their investigation into the incident. Aung Kyaw Naing,